Kiristaalo bogsashada ayaa dhab ahaan shaqeeya? Cusboonaysiin cusub oo cusub 2021
Haddii aad ku jirto adduunka daawada kale, waxaad u badan tahay inaad maqashay kristantar. Magaca loo bixiyo macdanta qaar, sida quartz, ama amber. Dadku waxay aaminsan yihiin astaamo caafimaad oo faa'iido leh.
Ka soo iibso dhagaxyo qaali ah dukaankeenna qaaliga ah
Haysashada kiristaalo ama ku dheji jirkaaga waxaa loo maleynayaa inay dhiirrigelinayso bogsiin jireed, shucuureed iyo ruuxi ah. Crystals ayaa loo maleynayaa inay tan ku sameeyaan iyagoo si wanaagsan ula falgalaya tamarta jirkaaga, ama chakra. Inkasta oo qaar kristaniinnada bogsiinaya ay u maleynayaan inay yareynayaan buuqa, kuwa kale ayaa loo maleynayaa inay hagaajinayaan feejignaanta ama hal-abuurka.
In indhaha dabeecadda
Waxyaabaha caafimaad ee qarsoodiga ah ee lagu daaweeyo kareemada
Dhakhaatiirta cilmi baarista
Lama yaabin, cilmi baarayaashu waxay sameeyeen daraasado yar oo caadi ah oo ku saabsan kristantarrada. Laakiin mid, oo dib loo qabtay 2001, ayaa lagu soo gabagabeeyay in awoodda macdantaas ay ku jirto "isha kan wax arka".
Marka laga eego Congress of Psychology ee Rome, 80 dadku waxay buuxiyeen su'aal-wareyaal loogu talagalay in lagu qiimeeyo heerka ay aaminsan yihiin dhacdooyinka ba'an. Later, kooxda daraasadda waxay waydiisatay qof walba in uu fikiro shan daqiiqo. Inkastoo ay haystaan ​​kareem quartir dhab ah ama kareem been ah oo ka sameysan quraarad.
Intaas ka dib, ka qaybgalayaashu waxay ka jawaabeen su'aalo ku saabsan dareenka ay dareemeen markii ay ka fekerayeen kristantarrada bogsashada. Labada kiristaalo dhab ah iyo kuwa been abuur ahba waxay soo saareen dareenno isku mid ah. Dadkana ku tijaabiyey su'aal-qabka 'paranormal-aaminsan' waxay u muuqdeen inay la kulmeen dareemo ka weyn kuwii ku majaajiloodey paranormal.
- Waxaan ogaanay in dad badani ay sheegteen inay dareemayaan dareemo aan caadi ahayn. Intaad hayso kiristaalo, sida xoqid, kulayl iyo gariir. Haddii aan horay ugu sii sheegnay inay tahay waxa dhici kara, ”ayuu yidhi Christopher French, oo ah borofisar cilmu-nafsiga ka dhiga Jaamacadda Goldsmiths, Jaamacadda London. "Si kale haddii loo dhigo, saameynta la soo sheegay waxay ka dhalatay awoodda soo jeedinta, ee ma ahan awoodda kristantarrada."
Baadhitaano badan ayaa muujinaya sida ay u awood badan tahay saameynta placebo. Haddii dadku rumeysan yihiin in daaweyn ay ka dhigeyso inay fiicnaadaan. Qaar badan oo ka mid ahi way fiicnaadaan ka dib markay daaweeyaan. Xitaa haddii saynisyahannadu caddeeyeen inay daaweyn ahaan qiimo lahayn.
Qaadashadiisu waa mid aad ka filan karto saynisyahan. Haa, waa run ahaantii waa sax in la sheego in kristantarradu aysan iyagu iyagu lahayn mid ka mid ah sifooyinka caafimaad ee qarsoodiga ah ee loo aaneynayo dadka isticmaala.
Laakiin maskaxda bina-aadamku waa shay awood badan, waana khiyaano in si toos ah loo yiraahdo kristantarradu ma shaqeeyaan, haddii aad ku qeexdo “shaqo” inaad tahay wax faa iido ah.
"Waxaan u maleynayaa in aragtida bulshada iyo caafimaadka ee ku saabsan placebo ay tahay wax been abuur ah ama been abuur ah," ayuu yiri Ted Kaptchuk, oo ah borofisar daawo ka ah Harvard Medical School. Laakiin baaritaanka Kaptchuk ee ku saabsan placebo wuxuu soo jeedinayaa in ficilada daaweynta ay noqon karto "dhab" iyo "mid xoogan". In kasta oo uusan baran daraasadda, oo uusan ka faalloon doonin sharcinimadooda ama wax ku saabsan daawo kale. Kaptchuk wuxuu qoray in saameynta daaweynta ee ku-meel-gaadhka ah ee daaweynta loo tixgelin karo qayb ka mid ah waxtarkeeda, iyo in faa'iidooyinka ku-meel-gaadhka ah ee loo yaqaan 'placebo-induced' ay tahay in la dhiirrigeliyo, oo aan la ceyrin.
Dhakhaatiir badan ayaa rumeysan awooda qudaarta. Daraasad 2008 BMJ waxay ogaatay in qiyaastii kala bar dhakhaatiirta la daraaseeyay ay soo sheegeen iyagoo isticmaalaya daaweynta placebo si loo caawiyo bukaankooda. Caadi ahaan, dhakhtarku wuxuu kugula talinayaa xannuun joojiye xanuun badan ama fitamiin dheeri ah. In kasta oo midkoodna lagu tilmaamin astaamaha bukaanka. Intooda badani waxay u arkeen ku dhaqanka qoritaanka daaweynta placebo mid anshax ahaan la oggol yahay, qorayaashu waxay soo gabagabeeyeen.
Haysashada kristantarrada wax lagu bogsiiyo, dabcan, lama mid aha liqidda Advil. Ha ka filin dhakhtarkaagu inuu kugula taliyo kristal booqashadaada xigta. Marka laga eego daawada caadiga ah iyo sayniska ku saleysan caddaynta, cilmibaarista jirta waxay soo jeedinaysaa inay la mid yihiin saliidda masaska. Laakiin cilmi baaris ku saabsan saameynta placebo waxay soo jeedineysaa in xitaa saliida masku ay faa'iidooyin u yeelan karto kuwa aaminsan… akhri wax dheeraad ah >>
ururinta miraayadahadukaanka dabiiciga ah ee dabiiciga ah
CHF: Faransiiska Swiss (CHF)
FKP: Pound Islands Falkland (£)
GEL: Lacagta Joorjiyaanka (₾)
ISK: kronna Iceland (kr.)
NGN: Naayjeeriya (₦)
SEK: krona iswiidhish (kr)
TJS: somoni Tajikistani (ЅМ)